Mmeputakwa nke begonias nke mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi: mgbe ịgha mkpụrụ na seedlings, nsogbu ndị dị aṅaa ga-ezute, na otu esi echebara osisi ahụ nke ọma - Ụlọ, ụlọ - 2020
Kedu ka esi mụta begonias nke na-aga n'ụlọ ma na-elekọta osisi ahụ nke ọma?
Mgbe okooko osisi begonia (lat. Begonia semperflorens) bụ osisi ndị na-eto eto nke Begonia. Enwere aha umu anumanu maka uzo na - aga n'ihu - ma n'oge oyi ma n'oge okpomọkụ. N'akwụkwọ akwụkwọ, ị nwere ike ịchọta aha - okooko osisi na okooko osisi na-aga n'ihu, n'ime ndị mmadụ a na-akpọ osisi ahụ "ezigbo mma." Isiokwu a ga-agwa gị banyere atụmatụ nke osisi a dị ebube, otu o si arịwanye elu na otu esi eme ka ọ dịkwuo n'ụlọ site na iji mkpịsị osisi ma ọ bụ mkpụrụ, yana iwu maka nlekọta na-elekọta nke ifuru.
Kedu ka esi eme?
Kedu ka esi eme otutu n'ulo?
Nkwadebe nke cuttings
Anyị na-akụ mkpụrụ maka seedlings
Nsogbu puru ime
Ụkpụrụ nlekọta kwesịrị ekwesị
Atụmatụ nke osisi ahụ
Maka akuku osisi:
akwara anụ ahụ (8-40 cm);
ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ezigbo, glossy epupụta;
acha uhie uhie, pink, coral, ude).
A na-ewere Brazil dị ka ebe a mụrụ ebe begonias mgbe ọ bụla. Ụdị iche iche nke ndị ọrụ ozuzu na-azụlite ọrụ maka ụdị ndụ dị iche iche, ọ bụghị naanị na ọnọdụ oke ebe okpomọkụ. Mgbalị ndị na-azụlite na-eduzi ọ bụghị nanị na ọdịiche dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche, kamakwa na mbenata oge site n'ịgha mkpụrụ maka okooko.
Begonia bụ okooko osisi mgbe niile - otu n'ime osisi ndị kachasị ewu ewu na-eto eto n'ụlọ ma na-eke akwa akwa na alpine n'ubi. N'ihi eziokwu ahụ na usoro usoro dịgasị iche na agba agba, ndị na-elekọta ubi nwere ike ịmepụta kapeeti nke begonias na flowerbeds.
Nyere! A na-akpọ Begonev ezinụlọ onye gọvanọ France nke Haiti Mbụ Begon, onye bụ onye maara ihe na onye nchịkọta nke ụdị a.
Osisi na-agbasa ma site na osisi na cuttings. Begonia na-etolite n'ọhịa na-emeghe n'oge okpomọkụ, mgbe ọ na-etolite n'ime ite na njedebe nke oyi. Na greenhouses, osisi na-ọma propagated site na mkpụrụ, na n'ụlọ, grafting bụ mma.
Na-enye ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, oge ntoju na 12-14 izu. Iji mee ka "ihe mara mma" gbanye oge na May, ọ dị mkpa ka a kụọ ya na Jenụwarị n'ụlọ n'ụlọ greenhouses ma na February-March n'ihi ogologo oge. A na-agha ịgha n'oge okpomọkụ na July, na okooko osisi na-apụta n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Ihe niile iche ma e wezụga begonia nke oge ọ bụla na-ebu okooko osisi, na-ejigide atụmatụ nke ụdị mgbe a na-agha mkpụrụ.
Maka mmeputakwa ụlọ ka a na-ejikarị usoro vegetative eme ihe.
Na oyi, okooko osisi begonia, n'ihi enweghị ìhè, na-atụpụ akụkụ nke epupụta ma na-esetịpụ ntakịrị, nke a na-apụghị izere ezere nke ọma. Nri nke ndị na-eto eto na-eto eto na-aga n'ihu. A na-egbutu ndị na-eto eto na mma dị nkọ, nke mere ka ọ ghara imebi osisi n'onwe ya ma hapụ ntụcha doro anya na azu.
Ogologo oge kachasị mma nke alaka ụlọ ọrụ ahụ bụ 10 cm. Ọ bụrụ na epupụta buru ibu ma ọ bụ ọtụtụ n'ime ha, a ghaghị ịchekwa ha ka ha wee ghara iri nri niile.
A ghaghị ahapụ nkụchasị onwe ya ruo ọtụtụ awa.. Mgbe ihe ọṅụṅụ site na ịkpụ na-akwụsị ịnwụ, ị nwere ike ịga n'ihu.
Ogwe begonia bụ ọkara mmiri, n'ihi ya ọ ka mma ịgbanye ya ozugbo n'ime ala iji zere rotting nke oge ịse. A na-eli ya n'ụzọ dị ala na ala a kwadebere na nke 1-2 cm ma kpuchie ájá.
Iji mee ka ikuku dị mma akpa na ifuru na-etinye n'ime ebe dị ọkụ na ebe dị mma ma nye ha mmiri zuru ezu na ịkụcha. N'ime oge mbụ mgbe akukuchara, a ga-ejikarị obere bekee a na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ị na-egbutu ya, na-eṅomi mmetụta ahụ griinụ.
Ezigbo begonia na-enye mgbọrọgwụ ngwa ngwa, ya mere, ọ bụghị ihe dị mkpa ka a na-eme ka mmepe nke na-eme ka e nwee ihe mgbakwasị ụkwụ.
Tupu ịgha mkpụrụ, a na-ehichapụ begonia na mbara ihu ruo ọtụtụ izu. Ọdịda mmiri na-ewere ọnọdụ na mbubreyo May-mmalite June. na-adịgide adịgide nke eto eto.
Mkpụrụ osisi na nke ọma tupu mmiri ara.
Ọ bụrụ na ndị osisi tojuru ma ọ bụ agbatị, ogologo Ome na-adị mkpụmkpụ.
A na-etinye ifuru na oghere ya na nchekwa nke ụwa 1-2 cm n'okpuru ogo ọkwa nke seedlings, ala gburugburu azuokokoosisi na-compacted.
Ogologo otu ifuru site n'onye ọzọ mgbe akuku kwesịrị ịdịkarịa 10 cm.
Ọ dị mkpa! Ebe dị mma nke dị mma maka ebe ọdịda ahụ; ala dị ntakịrị acidic, ọgaranya na-eme nri, ma ọ bụghị mmiri.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ịlee vidiyo na mgbasa ozi site na mkparịta ụka:
Begonia osisi dị obere, ájá uzuzu, agba aja aja na agba, ya mere maka nchekasị nke akuku ha na-atụ aro ka ha wee tinye ájá.
A na-akụ mkpụrụ osisi na griin haus ma ọ bụ igbe na January-February.
A na-eji ala dị nro na-eme ka ọ dị ala.
A na-etinye mkpụrụ na ala ahịhịa, na-agbanye n'ala ma kpuchie ya na obere oyi akwa nke ájá ájá.
A na-ekpuchi akpa ahụ na iko ma ọ bụ na-esere ihe nkiri na-etinye aka na ventilation.
Mgbe ụbọchị 10-12 gachara, akpa akpa kwesịrị ịpụta.
Mgbọrọgwụ na ọkụ rotting ruru oke atọ na ezughi oke ventilashion.
Ichapu seedlings na oke okpomọkụ na ogbenye na atọ.
Ịgha mkpụrụ seedlings n'enweghị ìhè.
Mmebi na mkpuru osisi n'oge ebido.
Ighachi akwukwo ndi nwere oke ikuku.
Ọnwụ nke seedlings n'ihi mmiri frosts.
N'uzo buru ibu n'izu nke mbu mgbe ichighariri, mgbe ahu ka agafe agafe.
Iji zere ọkụ ọkụ ọkụ na-acha n'ehihie, kwụsị ịgbara.
Ghaa ata ahu ma wepu ala n'ime izu mbu mgbe akuku.
Na-eri nri na mmiri na okpomọkụ n'otu ugboro kwa izu abụọ na nri na ịnweta ma dị mgbagwoju anya.
Wepu akwukwo edo edo na igbe osisi.
Iji mee ihe na-egbu egbu na-egbuke egbuke megide ire ere.
Gụkwuo banyere otu esi elekọta ụlọ begonia mgbe nile n'ụlọ, akọwapụtara na isiokwu dị iche.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị lee vidio banyere otu esi akụ mkpụrụ osisi begonia mgbe niile:
Na-ele anya nke ọma na nke a ụdị blogoning begonia, dika Elatior. Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na esi agba ahịhịa a dị iche iche na otu esi elekọta ya.
Ezigbo begonia - otu n'ime osisi na-enweghị atụ ma mara mmanke dị mma maka na-eto eto na ụlọ na n'èzí. Osisi okooko juputara ma jiri nlezianya na-elekọta ya, ọ nwere ike ịchọta okooko osisi dị iche iche n'afọ niile. N'ihi ụdị dịgasị iche iche, site na ijikọta begonias mgbe ọ bụla na akwa akwa, i nwere ike ịmepụta ezigbo ihe eji emepụta ihe n 'uwa.
Nri owuwe ihe ubi: otu esi edebe carrots n'ime ubi n'ime ala ruo mgbe mmiri?
Ọkachamara mara mma "Tsopegiya Sandersona": ilekọta ụlọ, okooko, foto
Atụmatụ nke ịkọ nke Saintpaulia n'ụlọ
Santolina: kụrụ ma lekọta ubi
Chọpụta ma enyo nwere ike ịbanye n'ime ntị? Ihe ga-abụ, ihe dị ize ndụ, na ihe kachasị mkpa ime
Ntinye aka nke ntinye na tabletop